Fikambanana Pasitera – Fiangonanana Evangelique SHINE
Fiangonanana Evangelique SHINE
( NEW GENERATION – TARANAKA VAOVAO)
Ny Taona 2014 dia napetrak’Andriamanitra navesatra tao ampon’ny mpanompony Bishop Patrick ANDRIANARIVO ny Hanangana fikambanan’ny Mpitarika .
Vision / fahitana
Hampandroso sy hanitatra ny fiangonana ho sady lehibe no maro ary ho fiarovana ny fiangonana ( ny mpitarika sy ny mpino ao aminy.)
But / Tanjona
Handranitra ny mpanompon’Andriamanitra mba handroso lalina hatrany amin’ny fanompoana ary hahatratra ahavo ambony lavitra hatrany.
Hametraka ny fomba hiaraovana ny mpitarika sy ny fiangonana amin’ny fahavakisana na fisarahana lava izay manakorontana fiangonana sy ny tenan’i Kristy. Hametraka Ny tena loyaute marina.
Hametraka ny tena fanajana marina Ray aman-dreny am-panahy sy fahefana ara-panahy. Fanajana mpitarika sy ny fanompoana /na ministera /na fiangonana.
Hampisy fifandraisana tsara feno fanetretena sy fitiavana eo amin’ny mpitarika sy ny mpiara miasa aminy ary ny mpino ao amin’ny ministera sahaniny ary amin’ny samy mpanompon’Andriamanitra.
Hampisy ihany koa fomba hifandraisana tsara feno fifanomezam-boninahitra sy mihitatra mihalehibe hatrany amin’ireo izay efa ao anaty fikambanana.
Hahatonga fifanakalozana traikefa, hevitra, fahatakarana izay hitondra fandrosoana sy fahombiazana ho an’ny asa fanompoana.
Mianatra mba hahomby foana – Hanorona sy hivavaka ho an’ ireo mpikambana ny fomba hampahomby ao anaty fanompoana, ao anaty atmosfera feno fanetretena sady tsy misy fifampialonana ary feno fitiavan’ny mpirahalahy sy fahaizana mifankalaza.
Hampitombo hatrany ny fahaiza mitarika (leadership) sy fahaiza mitondran’ny (management) tsirairay amin’ny alalan’ny fampianarana /sy konferansa manara penitra tsara izay karakaraina (misy conference pour eglise locale, misy conference nationale, ary misy conference internationale izay hanasana mpanompon’ Andriamanitra lehibe maro avy any ivelany).
Hampitombona hatrany ny jery lavitra, hi –inspirer-na “vision fraiche” tsara sy fanantenana lehibe ny amin’ny hoavy. Hanampina ny mpikambana sy ny tsirairay mba hitondra fihavahana marina (difference) sy fiovana any amin’izay misy azy ho an’ny fanjakan’Andriamanitra sy ho fihitaran’ny fiangonana / fikambanana.
Hifanohanan’ny samy mpitarika sy hifampiarovan’ny samy mpitarika sy ny fiangonana mba samy handroso ary samy ho lehibe daholo araka izay niantson’ny Tompo azy, nefa tsy mifanararaotra na mifanimba fa ao anaty fifanajana sy fifankatiavan’ny mpiaralahy madio.
Mission / Iraka
Hampianatra sy hanoro ary hiaro ny mpitarika amin’ny alalan’ny fampianarana ny zava miafin’ny tenin’Atra, sy ny tena fanompoana marina ao anaty fanajana feno ny fanompon’ny hafa.
NATAO HO AN’IZA ITY FIKAMBANANA ITY?
Natao ho an’ny mpanompon’Andriamanitra rehetra izay mitondra –na mitarika fiangonana na fikambanana kristianina, na inona ministerany na inona “titre” entiny na ananany na nanosorana azy ka resy lahatra ny vision sy mission ary indrindra ny tanjon’ny fikambanana.( Apostoly, Mpaminany, evanjelista, Mpitandrina, Mpampianatra,eveka (bishop), reverend, leader des Eglises, misionera…)
Natao ho an’ireo manana fihaviana ara-panahy mazava, toy ny hoe iza no rainao ara-panahy, sy ny fiangonana nihavianao ary nametraka anao tao anaty fanompona. Mba ho fitandrovana sy fanajana ny asa fanompoana sy ny tena irak’izao fikambanana izao no antony hamantarana mazava izay maniry hiditra ho mpikambana, ary ho fiarovana azy sy ny fiangonany.
Natao ho an’ireo tsy manana ray aman-dreny am-panahy (noho ny tsy fahalalana) nefa tsy nanana olana tamin’ny fiangonana. Ary vonona hanaraka ny fitsipika araka ny tanjona mazava napetraky ny fikambanana.
Afaka hatsangana ho zanaka amin’ny fanompoana raha maniry nefa manaiky hanaraka ireo fampianarana sy fepetra mifanaraka amin’izany.
Natao ho an’ireo mpitarika rehetra te hahomby, te handroso sy te ahavita zavatra lehibe lavitra kokoa hatrany ao anatin’ny antso niantson’ny Tompo azy.
Natao ho an’ireo maniry hiaro ny mpitarika sy ny fiangonana entiny amin’ireo mpanakorontana sy mpandrava fiangonana.
TSY NATAO HO AN’IZA ITY FIKAMBANANA ITY?
Tsy natao ho an’ireo pastera izay tsy manana fihaviana ara panahy mazava, na niady tamin’ny fiangonana nisy azy teo aloha, na nanakorontana ny fiangonana nisy azy teo aloha, ka niala tsy nisy tso drano mazava.
Tsy natao ho an’ny mpitarika fiangonana TSY kristianina na iza io na iza ary na inona na inona izany fiangonana na fikambanana izany.
Tsy natao hoan ‘ny mpanao politika na mpitarika politika mitady fikambanana hanehoana hevitra na hakana poids amin’ny maha politisianina azy.
Tsy natao ho an’ny mpino tsotra fa mpitarika ihany. Fa raha responsable anaty fiangonana dia tsy maintsy mahazo alalana an-tsoratra avy amin’ny pasterany na mpitarika lehibe vao mahazo miditra mpikambana ato.
Tsy natao ho anao ity raha tsy maha resy lahatra anao ny iraka sy tanjon’ny fikambanana.
IREO TOMBOTSOA 10 LEHIBE HO RAISINAO REHEFA MPIKAMBANA IANAO
Manana badge manokana hamantarana anao
Misy groupe intercesseur izay mivavaka ho anao manokana sy ny fiangonana entinao izay natsangan’i Bishop Patrick manokana ho an’ireo mpitarika rehetra ato anatin’ity fikambanana ity.
Manana karatra VIP (Very Important Person) manokana ianao rehefa manatrika ny konferansa izay karakaraina.
Raha mividy ny boky na dvd na produit vokarin’i Bishop Patrick ANDRIANARIVO ianao dia mahazo fihenam-bidy manokana.
Isan’ireo ampahafantarina voalohany foana amin’ireo konferansa lehibe maneran-tany izay karakarain’ny fiangonana goavana any ivelany mba hampandrosonao ny asa fanompoanao. Ary mahazo fanohanana ara –kevitra ianao raha ilainao manokana izany.
Afaka mividy sy mampiasa ilay boky kely na « devotion journaliere » ao ampiangonanao ianao na ny fikambananao sady mivarotra izany ao aminao ary mahazo ilay boky amin’ny vidin’ny mpaka maro (izany hoe ahazoanao vola tombony hanampianao ny asa fanompoanao).
Raha tafiditra « membre de bureau » an’i Bishop ianao amin’ny asa evanjelisita izay hataony dia mahazo tombotsoa manokana toy ny :
-fahafahana misakafo maimaim-poana amin’ny conference internationale izay karakarainy,
-Mahazo karatra BOARD MEMBER ianao rehefa manatrika conference manokana
-Mahazo seza sy fikarakarana manokana ianao rehefa manatrika ny fitoriana filazantsara izay ataony manerana ny Madagasikara.
-Mahazo fanamorana fitaovam-pitanterana (fihenan’ny sarany) amin’ireo conference internationale lehibe izay karakarainy.
-Afaka mahazo fihenam-bidy be manokana ianao raha hanao fandaharana amin’ny onjam-peo (radio fandresena na la baie des anges) manerana ny renivohim-paritanin’ ny Madagascar na izay faritra misy anao.
Afaka mahazo fampianarana maro samy hafa ianao , (raha mandresy lahatra anao tsara) hampianarinao ny mpino vao nanolotena, na ho lasa mpianatra (disciple) na misionera, na mpitarika vondrom-bavaka na mpiandraikitra hampandrosoanao ny asa fanompoana entinao.
Manana tombotsoa ianao hifandray amin’ireo pastera maro eran’ny Madagascar hifanampy aminao sy hifampahery aminao ao anaty fifanajana sy fifampiarovana. Eny fifandraisana any ivelany mihitsy ihany koa aza noho ity fikambanana ity.
Tombotsoa ho anao ny fananana rahalahy sy mpiara mihazakazaka tsy mifanenjika na mifanaratsy na mifanao kendry tohana fa mifampiaro sy mifanohana ary mifampahery amin’ny fotoantsarotra na mahafinaritra na manahirana ao anaty fanompoana. (true brotherly love)
MISY PLATFORME 2 LEHIBE
1- Misy ny plate-forme virtuel (na sehatra hifaneraserana)
Ity plate-forme ity dia amin’ny trano-kala no misy azy, misy lesona sy fampianaran maro entinao hampandroso anao manokana, ary ny mpiara miasa aminao sy ny fiangonana entinao
Natao ity ihany koa hifandraisana manokana satria misy karazany 3 ny ao anatiny
1-VIP (very important person) : ity dia natao ho an’ireo hiditra ao anatin’ity plate-forme ity mba handray ireo fampianarana ao manokana. Misy latsakemboka isam-bolana ao anatiny izay tsy lafo mba hikarakarana ny service rehetra ao anatiny. 10.000 Ar isaky ny telo volana.
2-PLATINIUM: ity indray ho an’ireo maniry hiditra anaty cercle an’I Bishop, izay te hanana sy handray fampianarana manokana, mba hampandrosoany ny fiainany na/sy ny fanompoany. Misy latsakemboka isam-bolana ao anatiny, izay tsy lafo mba hikarakarana ny service rehetra ao anatiny. 25.000Ar isaky ny telo volana
3-USMM (Uplifting spiritual Master Mind) : ity indray dia natao ho an’ireo te ho zanaka, ka mila fanohanana sy torohevitra manokana, mba hanampiana sy hanohanana sy hiarovona anao mba handrosoanao manokana. Raisina toy ny zanaka ianao ka manana fifandriasana manokana mba handroso sy voaaro hatrany. Misy latsakemboka isam-bolana ao anatiny izay tsy lafo mba hikarakarana ny service rehetra ao anatiny. 50.000Ar isaky ny telo volana
2- Misy ny plate-forme physique.
Ity indray dia fahafahana mifandray sy mandray fampianarana mivantana izay misokatra ho an’ny rehetra.
Misy ny fampianarana sy fifandraisana araka izay efa voalaza etsy ambony izay maimaim-poana
Fa misy kosa anefa ireo izay mety tsy afaka miditra amin’ny platform virtuel noho ny antony maro, fa afaka miditra plate-forme physique (VIP – PLATINIUM – USMM). Misy latsakemboka isam-bolana ao anatiny izay tsy lafo mba hikarakarana ny service rehetra ao anatiny.
Fiangonana Evangelique SHINE
Cliquez pour visitez notre siteweb
Copyright © 2021 Fikambanana Pasitera